Lamjung Manang News | » हिरा भन्दै नक्कली वस्तु विक्री गर्ने २ जना पक्राउ हिरा भन्दै नक्कली वस्तु विक्री गर्ने २ जना पक्राउ – Lamjung Manang News
बेसीशहर, माघ २७ ।
हिरा भन्दै नक्कली सेतो रंगको ढुंगा जस्तो वस्तु विक्री वितरण गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
बेसीशहर नगरपालिका वडा नंं ११ घर भइ हाल बेसीशहर ८ बस्ने ५८ बर्षकी सावित्री सिलवाल जोशी र बेसीशहर नगरपालिका वडा नं. ३ का आशिक दनाई पक्राउ परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक यादव ढकालले जानकारी दिए ।
उनीहरुले गत पुस २ गते बेसीशहर नगरपालिकाको वडा नं. १० बस्ने ५९ बर्षकी कौमाया गुरुङ र सोमबहादुर गुरुङलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी नक्कली हिरा विक्री गरेका प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरुले हिरा भन्दै सेतो रंगका ढुंगा जस्ता वस्तुलाई बेसीशहर नगरपालिकाको वडा नंं १ चिप्लेटीमा तीन लाख रुपैयाँमा विक्री गरेका थिए ।
सो नक्कली हिरा खरिद गर्नेहरुसंग तत्काल तीन लाख रुपैयाँ भए पछि बाँकी पैसा पछि दिने सहमतिमा ५० हजार रुपैयाँ दिएका थिए । त्यसपछि सो वस्तु विक्री गर्ने जोशीले पटक पटक फोन गरी बाँकी पैसा माग गर्ने गरेकी थिइन् । उनीहरुसंग सो वस्तु सक्कली हिरा भएको र पछि १०÷१२ लाख रुपैयाँमा विक्री गराइदिने आश्वासन दिई उनले थप ५० हजार फुत्काएकी थिइन् ।
१ लाख रुपैयाँ हिरा जस्तो चिजमा लगानी भए पनि हिरा हो वा होइन भन्ने कुरामा कौमाया र सोमबहादुरलाई शंकै थियो । शुरुमा बहुमूल्य हिरा थोरै पैसामा पाए पछि खरिद गरेका उनीहरुको शंका बढ्दै जाँदा यता उता सोधपुछ गरेपछि हिरा नभएको थाहा भए पछि उनीहरु प्रहरी कार्यालयमा गई उजुरी गरेका थिए । उनीहरुको उजुरीको आधारमा गत विहीबार प्रहरीले आरोपीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक बसन्त पाण्डेका अनुसार हाल आरोपीहरुलाई अदालतबाट ७ दिनको म्याद थप गराई घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।